40 Doolar halkii kali ah...25 Doolar halkii il ah!!!.
Jariiradda Alwadan ayaa waxay Maanta 18.12.2004 ogaatay warar sir ah oo ku saabsan falalka Ciidamada Maraykanku ay ka wadaan dalka Ciraaq ina ka mid tahay Koox Dhakhaatiir ah oo la socoto Ciidamada Marayka oo Xubnaha Bani-aadanka ka Baayac mushtarta.
Dhakhaariirtaas oo Qaliin deg-deg ah ku samaysa qofkii Ciraaqi ah ee Dhaawac ah inta uusan weli dhimanin ee naftu ay ku jirto ka dibna lagu rido Talaagado Baraf ah loona Suuq gaynayo Isbitaalada ku yaala Maraykanka, arintaasuna ay hadda noqotay Tijaara Raabixa ( Taajirnimo Deg-deg ah).
Wararka Sirta ahi waxay sheegayaa in Kooxdaas dhakhaatiirta ahi ay daba socdaan marka Ciidamada Maraykanku ay Weerer ku Qaadayaan Ciraaqiyiinta ka dibna Qaliin deh-deg ah ay ku sameeyan dadka Dhaawaca ah iyo kuwa hadda ay Naftu ka baxdayba.
Warbixintu waxay intaas ku daraysaa in lahelay Maydad faro badan oo Xubnihii ay ka maqan yihii iyo kuwo wadaxyo go'an oo Qalfoof oo kaliya ah.
Mar Mas'uuliyiinta Ciidamada Ciraaq wax laga weydiiyay waxay sheegeen inaynan wax Jawaab ka bixin karin. Waxaa kale oo ay warbixintu sheegtay in Gubidii dadka Ciraaqiyiinta lagubayey ay ahyd mid lagu Raad gadayo Dhacdadan. Dhakhaatiistaasu waxaa la sheegay inay qorteen Canaasir Ciraaqiyiin ah oo usoo uruurisa amaba u'sheegta meelaha dad Dhaawac liita ah.
Sicirka halkii Kali ah ayaa la sheegay inuu hadda marayo 40 Doolar , halkii il ah ee caafimaadqabtana 25 Doolar.. Waxaa lagu arkay meelaha Dagaaladu ka dhacaan Niman Dhar mad-madow qaba oo Gacmahana ay Galoofyo ugu jiraan oo Rog-rogaya Maydyada daadsan Goobta Dagaalku ka dhacay meelkasta oo Dagaal ka dhaco Maydadkaas qaarkood ay Gawaadhi khaas kula tagaan.
DHakhaatiirta Yurubiyaanka ah ee iyagu hadaba Ciraaq ka shaqeeya ayaa sheegay inay heleen Maydad Xubnaha qarkood ay maqan yihiin ayna ka heleen Aagaggii CIidamada Maraykanku ay ka Dagaalgaleen taas oon sinaba mac-qull ku ahyn in Maydadkaasu ay sidaas ahaayeeyn intii ayna dhimanin markii ay weydiiyeen Saraakiil Maraykan ahna waxaa loo sheegay inay Aamuska ku dadaalaan!!!.Taas oo ku kaliftay Dhakhaatiirtaas Yurubiyaanka ah inay Qoraan Qoraalo sir ah oo ay usooo gudbinayaan Wasaaradahooda Gaashaan dhigga si loola socda Xaaladahaas.